Mgbasa Ozi megide Erdogan >> Kwado PixelHELPER
24 nwere ike 2016
Mgbasa ozi megide onye ọchịchị aka ike Erdogan
Nkwụnye akwụkwọ By Oliver Bienkowski On 24. Mee 2016
Nnwere onwe nke okwu ahụ bụ nnukwu ihe ize ndụ na Turkey. Ebe ọ bụ na mgbalị ndị agha gbalịrị na July 2016, ọchịchị Turkish na-emegide nnọọ ndị nta akụkọ na ndị mgbasa ozi na ndị mgbasa ozi. Nke a na-eme ka ọnọdụ dị egwu na-aga n'ihu na mgbasa ozi na Turkey. A na-ejide akwụkwọ akụkọ ndị odeakụkọ, a na-ejide ndị edemede. Agbanyela ụlọ 130 ụlọ ahịa mgbasa ozi, gụnyere ndị na-ebipụta akwụkwọ 29, bụ ndị a na-akwụpụkwa.
N'etiti publicists na nkwusa eze egwu na Existenznot. Na Turkey, nnwere onwe nke okwu na-emebi. Nnwere onwe ikwu okwu bụ mmadụ ziri ezi na-adịghị agbanweli. Okwu, ozi na pịa nnwere onwe na-ndabere nke a free na onye kwuo uche ọha mmadụ. Anyị na-akpọ na Federal Government na EU Commission na-a doro anya ọnọdụ na ọnọdụ na Turkey achọ nnwere onwe nke nkwụsi na-arụsi ọrụ ike na ha mkpebi, na-eme na okwu na-adịghị eme ka ha a isiokwu nke mkpakorita. Mgbe na Turkey na n'ebe ndị ọzọ na ụwa bụ n'okpuru agha nnwere onwe nke okwu na machibidoro, Federal Government na EU Commission ga nyochaa ya iwu kwupụta mba ndị ahụ. Na-emetụta ndi oru nta akuko, authors mkpa ngwa ngwa enyemaka si Germany na Europe, n'ihi na ihe atụ, site na-abụghị n'usoro iwu na-esite mberede visa.
Ndị odeakụkọ, ndị edemede na ndị nkwusa, akwụkwọ, akwụkwọ akụkọ na magazin na-enye onyinye dị mkpa nye ochichi onye kwuo uche na nnwere onwe. Ya mere, anyị na-etinye aka na nnwere onwe nke ikwu okwu, ozi na pịa. Kwado arịrịọ anyị ma soro anyị maka ikike ndị a dị mkpa! Maka okwu na nnwere onwe!
Omume anyị na-eme mgbasa ozi ma hụ na echezọghị ihe ndị a dị mkpa. Biko kesaa ọrụ anyị na Facebook! Ọ bụrụ na ị kwadoro ihe kpatara anyị, anyị ga-enwe ekele maka onyinye ọ bụla ka anyị wee nwee ike ịnọgide na-eme mkpọsa anyị na-adịgide adịgide. Ọbụna euro ole na ole na-eme mgbanwe! Ikekọrịta na-elekọta. Biko kwado ọrụ ebere anyị.
►Ebe Ka mma
Mgbe ọtụtụ ihe ọkụkụ nke ndọrọ ndọrọ ọchịchị kwadobere na ụlọ ọrụ ndị nnọchiteanya nke Turkey na Saudi Arabia, ndị na-ese onyinyo nke PixelHELPER gburu ọzọ n'abalị ahụ Thursday. Ha na-eme mkpesa megide atụmatụ President Erdogan iji bulie nsogbu maka ndị omeiwu.
Oliver Bienkowski si PixelHELPER kwuru banyere ọrụ otu ahụ na nyocha.
Mr Bienkowski, n'oge abalị na Tọzdee, ị kwadoro ihe nrụnye ọkụ na ụlọ ọrụ ndị nnọchiteanya Turkey. On ngosi ndị a Eserese nke Turkish President Erdogan dị ka Queen Mama, ihe eze ukwu ugo okwu nke akp na a pseudo-isiokwu nke "Ndị mmadụ Observer", nke na-agụ dị ka: The Reichstag aga Erdogan ike. Kedu kpọmkwem ihe ị chọrọ ikwu ma ọ bụ ịkatọ ihe a?
"Anyị na-etinye mkpịsị aka anyị na ọnya ahụ" Anyị chọrọ ịkọwa nsogbu ndị dị na Turkey, nke sitere na nwelite nsogbu nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị omeiwu niile. Erdogan na-agbalị ugbu a ịgbanwe mba ahụ ka ọ bụrụ ọchịchị aka ike - nke ahụ bụ n'ezie ihe ndị ọkachamara na ndị nka na Turkey na-eme onwe ha. Naanị ihe anyị chọrọ ime, karịsịa maka njem ndị isi na Turkey. Anyị chọrọ ịchọta Oriaku Merkel otu ihe osise eserese na-emepụta ihe ma na-akatọ ọrụ Erdogan. Ọ bụ ya mere anyị ji mee ka Erdogan gbanwee okwu ndị bụ "Chineke zọpụta Queen" n'ụlọ ọrụ ndị nnọchianya Turkish - isi bụ nke Queen na naanị ihu Erdogan. Ebumnobi ndị ọzọ bụ nkọwa onwe onye. Ugo nke eze bu uzo karia swastika nani ngwa AKP n'ime ya site n'aka Mr. Erdogan. Na nke a isiokwu si "Volkischer Beobachter" pụtara nanị na Erdogan emepụta ya ikike site na nke a zuru incapacitation of Deputies ma si otú eleghị anya na a president usoro, nke o mere chọrọ gafee.
Nke ahụ abụghị nyocha mbụ ị rutere n'agbata Erdogan na Hitler, n'oge gara aga, e nwekwara oké olu. Ịchọrọ ịnọgide na-atụnyere iji teta ndị mmadụ?
Echere m na ndị niile a mụrụ na Germany nwere ọrụ dị egwu iji lụsoo iji ndị ọchịchị aka ike na ndị ọchịchị aka ọjọọ na Turkey. Echere m na ọ bụrụ na ị hụ 1933 na Iwu Nhọrọ ma hụ otú Erdogan si emeso ndị nta akuko, ndị ọrụ egwu na mmegide, mgbe ahụ onye ọ bụla na-ahụ ihe yiri ya. Onye ọ bụla nke na-anwa ịgọnahụ ya kwesịrị imeghe anya ya ma gụọ isiokwu ahụ, n'ihi na nke ahụ bụ ihe na-eme ugbu a.
Obere oge mgbe abalị ikpeazụ ahụ gasịrị: Enwere nsogbu ọ bụla ma ọ bụ ka egbochiri gị n'ụzọ ọ bụla?
N'abalị ikpeazụ ọ dị ka ihe nkiri ahụ "Ocean's Eleven". Anyị na ndị mmadụ atọ gara aga, otu nwanyị mara mma na-adọpụtakwa ndị cops n'oge ọ bụla anyị nwere ihe osise nka nke na-enwu na ụlọ ahụ ruo oge ise na iri. Mgbe ahụ, anyị na-ewere foto mgbe niile. N'oge a, anyị gara n'ihu ụlọ ọrụ ndị nnọchiteanya ahụ, ọ bụghị n'azụ azụ ebe nnukwu Wall dị. Oge a anyị chere na anyị kwesịrị itinye ya na mpaghara. Anyị mere nke ahụ ma ndị uwe ojii ahụghị. Nke ahụ dịkwa mma, n'ihi na anyị zọpụtara ha ọrụ na otú ahụ, n'ihi ya, anyị nwere ike ịrụcha ọrụ n'oge gara aga. Foto ndị a dịkwa online ugbu a. Kedu ihe mmeghachi omume na nke ahụ dị ugbu a? A na-ekere foto na Europe na n'ụwa nile, dịka anyị chọrọ ya. Anyị chọrọ ịkọwa ma kọwaa nsogbu. Anyị chere na Erdogan eruola ozi a. Ana m etinye aka na mkpịsị aka m na votu a n'ememme Friday adịghị mma ma onye ọ bụla nwere ike ịnọgide na-egbochi ha.
Egwu Mgbasa Ozi na TV Ntọala | Deutsche Welle |
Mgbasa ozi megide onye ọchịchị aka ike Erdogan July 7th, 2018Oliver Bienkowski
Android App Bahrain 13 Federal Chancellery ego ego Daphne Caruana Galicia Erdogan osisi ịta freeRaif nnwere onwe nke echiche Greece enyemaka ndi mmadu Chebe ndi oru nta akuko mkpọsa mkpọsa Catalonia Ịhụnanya amaghi oke Livestream Live iyi Enyemaka enyemaka Livestream Morocco NSA n'ụlọ ndị mkpọrọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị Akuku Orlando agha Saudi Arabia igweanu Help spanish mmiri Spirulina onwe United Stasi nke America ogwe aka ahia Ee anyị na iṅomi! nlekota oru